Roobabkii ka da’ay Caasimadda oo saameyn ku yeeshay qoysas danyar ah – Radio Muqdisho
Roobabkii ka da’ay Caasimadda oo saameyn ku yeeshay qoysas danyar ah
Roobabka oo ah xiliga Gu’ga, ayaa bilowdey aroortii hore ee saaka, waxa uuna ahaa Roob aad u xoog badan, waxa ay aheyd marxalad loo baahnaa Roobka laakin, saameyn ballaaran ayuu ku yeeshay dadka danta yar, Ganacsiga caasimadda, usu socodka Gaadiidka nooc walba, waxaa jira in meelaha qaarna uu ka geystay khasaare ballaaran.
Qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir, waxaa ku nool dad barakacayaal ah oo meelo kala duwan ka yimid, waxaa ka mid ah dadka ka soo laabtay dalka Yemen, inkastoo dadkaasi qaar loo sameeyey dib u dajin welina dadaalkaasi uu socda.
Degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir qoysas danya ah oo ku nool ayuu khasaare u geystay Roobka, waxaana wararku ay sheegayaan in laba qof ay ku dhinteen mid ka mid ahna dadkaasi uu yahay Ilmo yar, dadka ku nool Kaamamka ayaa iyaguna qaba dhibta uu sababay Roobka Muqdisho ka da’ay, kuwaas oo qaarkood uu ka dumay guryahii ay degnaayeen oo ka sameysnaa Cooshado iyo Baakado.
Degmooyinka Hodan iyo Warta-Nabadda ayaa lagu soo waramayaa in khasaare uu u geystay Roobka dad danyar ah oo aanan awoodin xilligaan in ay sameystaan guryo ay ka galaan Dhibicda Roobka ee xoogga iyo Dabeysha wadata.
Ganacsiga iyo Gaadiidka dadweynaha ayaa muddo saacado badan hakad gelay maanta kaddib markii ay daadad buux dhaafiyeen waddooyinka magaalada Muqdisho, iyadoo la arkayay dadka qaarkood oo xaafadahooda ku sameysanaya biyo-xireeno si aysan guryaha ugu gudbin daadka ka dhashay Roobka Muqdisho ka da’aay saacadihii la soo dhaafay.
Dadka qaar ayaa codsaday in gurmad loo fidiyo, maadaama ay deganyihiin guryo ka sameysan cowshado iyo baco, waxaana qoysaska barakacayaashu ay xilligan u muuqdaan kuwa ay soo wajahday xaalado adag oo xagga nolosha ah.
Dhanka kale roobab mahiigaan ah ayaa saaka ka bilowday magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubada Hoose, iyadoo qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ay codsadeen in ilgaar ah lagu eego.
Mas’uuliyiin bukaanno Soomaaliyeed ku booqday isbitaal ku yaalla Qatar “SAWIRRO”
Siminaar loo furay qaar ka tirsan shaqaalaha Wasaaradaha Maamulka K/galbeed ee dalka